स्वास्थ्य – Page 82 – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४१३:५९0
व्यस्त जीवनशैलीमा हामी धेरैजसो कि बाहिरको खाना खान्छौ, कि त घरमै भएका खाना सेलाएपछि तताएर खान्छौँ वा दुई पटक खाने खाना एकै पटक पकाएर राख्छौ र पछि तताएर खान्छौ । तर, के तपाईलाई थाहा छ,
सावधान यी पाँच चीजले तपाईँको ज्यानै लिन सक्छन् !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४१०:०६0
खाना खान कस्लाई मन पर्दैन र ? सबै खानाका सौखिन हुन्छन् । शौखको कुरा मात्र कहाँ हो र, हामीलाई जिउनकै लागि पनि खाना चाहिन्छ । हाम्रो जीवननै खानामा आधारित छ । हामी रूखबाट वा फ्रिजबाट
घरमै यसरी बनाउनुहोस् मिठो पालक मटन करी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४०९:२४0
सामग्री : खसीको मासु टुक्रा पारेको ५ सय ग्राम, तेल आवश्यकतानुसार, प्याज मसिनो गरी काटेको २ सय ग्राम, गोलभेंडा मसिनो गरी काटेको १ सय ५० ग्राम, लसुन–अदुवा पिसेको २० ग्राम, दही फिटेको आधा कप, ल्वाङ, सुकमेल,
बाजुरामा स्वास्थ्य बीमा दर्ता शुरु
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २६, २०७४०८:००0
बाजुरा, २६ चैत। बाजुरामा स्वास्थ्य बीमा दर्ता कार्यक्रम आइतबारबाट शुभारम्भ गरिएको छ । देशकै ३२औँ जिल्लाका रुपमा बाजुरामा स्वास्थ्य बीमा सदस्य दर्ता शुभारम्भ गरिएको हो । दर्ता कार्यक्रमको प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय
यी ब्लडग्रुपका पुरुषहरुमा नपुंसकताको खतरा बढी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०७४१९:२७0
यदि सेक्स जीवन बर्बाद हुदैछ भने तपाईको रहन-सहन होइन ब्लडग्रुप जिम्मेदार हुनसक्छ। बढ्दो तौल, मधुमेह र उमेरक कारण पुरुषको सेक्स लाइफमा असर पर्ने गर्छ। हालै गरिएका नयाँ अनुसन्धानहरुले यी कारण बाहेक ब्लड ग्रुपको कारण पनि सेक्स
खुट्टाबाट जुत्ताको गन्ध आउँछ ? यसरी हटाउनुस गन्ध, ६ टिप्स
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०७४१८:०५0
गर्मी सुरु भएसंगै पसिनाबाट उत्पन्न हुने समस्या बढ्छ । यसको लागी कतिपयले विभिन्न बडी स्प्रे तथा पर्फ्युको प्रयोग गर्दछन् भने कतिले नियमित नुहाउनु, पानी पिउने अनि सन्तुलिन भोजनमा ध्यान दिने गर्दछन् । गर्मीमा देखा पर्ने अर्को एउटा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०७४१३:०८0
बेलुकाको खाना चाँडै खानुपर्छ । खाना खानेबित्तिकै सत्नुहुँदैन । खाना खाएको २ घन्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ । खाना खानेबित्तिकै सुत्ने बानीले मोटोपन बढाउँछ । थोरै खाने, दिनमा तीन–चारपल्ट खाने बानी राम्रो हो । सधैँ नियमित रूपले
मह र कागती तातोपानीमा मिसाएर पिउदा हुने ९ फाइदा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०७४१३:००0
१. पाचन सुधार्छ पाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ । यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ । कागतीमा रहेको एसिडले पाचनप्रणालीलाई
रातो र सेतो मासु खानुमा के फरक ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०७४०९:२८0
काठमाडौं– मासु कस्तो खाने भन्नेमा धेरै अन्योलमा रहेको पाइन्छ । ताजा र स्वस्थ पक्षी तथा जनावरको मासु खानुपर्ने कुरामा सम्झौता गर्नुहुँदैन । तर, सेतो र रातो दुई प्रकारको मासुमा कुन खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो त ?
यौनशक्ति बढाउने ३ जडीबुटी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २४, २०७४१८:१५0
काठमाडौँ । काउछो नेपालीमा काउछो भनेर चिनिने यो जडीबुटीको वैज्ञानिक नाम मक्युना प्रुरिन्स हो । संस्कृतमा यसलाई कपिकच्छु या आत्मगुप्ता भनिन्छ । नेपालको तराईदेखि चार हजार पाँच सय फिटसम्मको उचाइ भएको पहाडी क्षेत्रमा जताततै पाइन्छ ।